Ọdịdị Semalt: Ọdịiche Dị n'etiti Mgbasa Weebụ na Data Mining. Ngwaọrụ kachasị mma maka ntinye data na ntanetị Web
Ngwuputa data bụ usoro nke ịchọpụta usoro ihe ntanetị nke na-agụnye teknụzụ dị iche iche nke ngwa ngwa. Na usoro a, a na-enweta data na ụdị dị iche iche ma jiri maka ebumnuche dị iche iche. Ihe mgbaru ọsọ nke ntinye data bu inweta ozi sitere na weebụsaịtị ndi choro ma gbanwee ya n'ime ulo ndi ozo maka ozo. E nwere ụzọ dịgasị iche iche nke usoro a, dịka nhazi, ntụgharị uche, mgbagwoju anya, ntanetị mmasị na njikwa data.
Nchịkọta weebụ bụ usoro nke wepụ data site na ibe weebụ - samsung mobile company website. A makwaara ya dị ka nbudata data na nchịkọta weebụ. Ngwá ọrụ na ngwanrọ na-enweta Web Wide Web na Protocol Transfer Protocol, na-anakọta data bara uru ma na-enweta ya dị ka ihe niile ị chọrọ. A na-echekwa ozi ahụ na nchekwa data nchekwa ma ọ bụ na ebudatara na draịvụ ike gị ka o jiri ya mee ihe.
Otu n'ime isi ihe dị iche n'etiti ntinye data na nchịkọta weebụ bụ otú e si eji usoro ndị a eme ihe na itinye ha n'ọrụ ná ndụ kwa ụbọchị. Dị ka ọmụmaatụ, a na-eji ntinye data chọpụta otú ebe nrụọrụ weebụ dị iche jikọtara na ibe ha. Uber na Careem na-eji igwe na-achọ nkà na ụzụ iji gbakọọ ETA maka ugbọ ha ma gbagote na nsonaazụ ziri ezi. A na-eji nyocha weebụ maka ọtụtụ ebumnuche, dịka nchọpụta ego na agụmakwụkwọ. Ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ike iji usoro ndị a iji nakọta data gbasara ndị na-asọmpi ha na iji mee ka ahịa ha dịkwuo mma. Ọzọkwa, ha na-arụ ọrụ dị mkpa n'inweta na ịntanetị ma na-echere ọtụtụ ndị ahịa.
Ntọala nke usoro ndị a:
Nchịkọta weebụ na nchịkọta data na-esite n'otu ntọala ahụ, mana usoro ndị a dị na ndụ dịgasị iche iche. Dị ka ọmụmaatụ, a na-eji ntinye data iji dọpụta ozi sitere na weebụsaịtị ndị dị na ya wee gbanwee ya dị ka usoro a pụrụ ịdabere na ya. Otú ọ dị, a na-eji ntanetị weebụ wepụ ọdịnaya weebụ yana ozi site na PDF faịlụ, akwụkwọ HTML, na saịtị dị ike. Anyị nwere ike iji usoro ndị a maka ịzụ ahịa, mgbasa ozi, na nkwalite nke ụdị anyị na mgbasa ozi mgbasa ozi bụ ebe kachasị mma iji kpọsaa ngwaahịa na ọrụ gị. Anyị nwere ike ịmepụta ruo 15,000 na-eduga na nkeji nkeji.
Weebụ weebụ nwere akụnụba nke ọmụma na data nwere ike iwepu naanị ngwaọrụ ndị a pụrụ ịdabere na ya dịka Bubata. io na Kimono Labs.
1. Bubata. na:
Ọ bụ otu n'ime ihe ntanetị kacha mma ma ọ bụ mmemme weebụ. Bubata. O kwuru na ọ ga-emetụta ihe ruru nde isii web peeji nke dị ugbu a, ọnụ ọgụgụ na-eto kwa ụbọchị. Site na ngwá ọrụ a, anyị nwere ike ịnakọta ozi bara uru site na saịtị dị iche iche, kpochapụ ya na-achọsi ike ma budata ya na draịvụ anyị kpọmkwem. Ụlọ ọrụ dị ka Amazon na Google jiri Bubata. iji wepu ọtụtụ peeji nke weebụ kwa ụbọchị.
Kimono Labs bụ ihe ntinye ama data na ntinye akwụkwọ weebụ. Akụrụngwa a nwere interface enyi na-arụ ọrụ ma gbanwee data gị n'ime ụdị CSV na JSON. I nwekwara ike wepu PDF faịlụ na akwụkwọ HTML na ọrụ a. Ya igwe mmụta nkà na ụzụ na-eme Kimono a zuru oke nhọrọ maka ụlọ ọrụ na programmers.